January | 2011 | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
တို့ဗမာကြေညာစာတမ်း အနှစ် ၈၀ ပြည့်အတွက် မဇ္ဈိမ မှာ ရေးခဲ့တာပါ။ ဘဝင်ကျဖို့ခက်တာတွေပါမယ်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူမျိုးစုဆိုင်းဘုတ်နဲ့ပါတီတွေ နေရာရလာတာ၊ တဖက်ကလဲ အာဏာရ စစ်တပ်နဲ့ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ကုန်တာ၊ “လက်နက်အသင့် ငြိမ်းချမ်းရေး” ဖြစ်နေတာ ဒါတွေကြောင့် ဒီစာကို ပြန်တင်ပါတယ်။ (၁) ခုတလော မြန်မာနဲ့ဗမာ ဘာကွာသလဲ၊ မြန်မာပြည်နဲ့ဘားမား ဘယ်စကားလုံးက လက်ရှိ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မလဲဆိုတာ ပြောဖြစ်ကြသည်။ ပြောရင်းဆိုရင်း တို့ဗမာဝါဒတွင် နာဇီကဲ့သို့ လူမျိုးသန့်စင်ရေးနှင့် ပတ်သက်တာမျိုးတွေပါသလားဆိုတာ မေးသူကရှိလာသည်။ တို့ဗမာတွေ လက်ဝဲစော်မနံခဲ့ရင် ကုလားမျိုးဖြုတ်ရေး၊ အဓမ္မဗုဒ္ဓသာသနာပြုတာတွေ ပေါ်လာနိုင်မယ်ဟုသာ အတွေးပေါက်မိသည်။ ဤအမြင်ကို ဗမာပြည်သည် တို့ပြည် ဗမာစာသည် တို့စာ စသည့် ကျောင်းဖတ်စာအုပ်သမိုင်းနှင့် အမျိုးသားရေးဝါဒကို အထုံကူးလာခဲ့သည့် မြန်မာအများစု […]
Filed under: anniversaries, history, nationalism, politics, recycled	|2Comments
မဇ္ဈိမ မှာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရေးခဲ့တာပါ။ မဆလခေတ်လို ပေါ်တင်မဲခိုးတဲ့ “လုပ်ပွဲ”ထိ ဖြစ်မယ်မှန်းမထားမိပါဘူး။ အပစ်အခတ်ပျက်တာ ကျည်ပွင့်လောင်ချာထုတာတွေလဲ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ရာစုတဝက် ခြစားယိုယွင်းနေတဲ့ စစ်နိုင်ငံတော်ကို ယုံပီး ဝင်ပြိုင်မိပါတယ်ဆိုသူများကိုတော့ ယုံရခက်ခက်ပါပဲ။ ဘုမသိဘမသိ ခွေးတောင် အမြီးဖြတ်ထဲ့လိုက်မယ်ဆိုပီး ပုတ်သင်ညိုတွေမကြိုက်လို့ ထဲ့လိုက်တဲ့မဲနဲ့ (အထက်စာစစ်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ မဟာဒုတ်ကံစမ်းမဲနဲ့) ကံစွတ်ပီး အမတ်လေးဖြစ်ဖူးသူများမှာလဲ စကြာဝတေးမန္ဓတ်မင်းအလား လေသံများက တယ်ကြီးကြသကိုး။ နှဖားကြိုးဆောင့်ဆွဲခံရတဲ့အခါများမှသာ နှာနုပွန်းပီး နွားမိုက်ကြီးနောင်တ ရပြပါလိမ့်အုံးမယ်။ ထိုဒီမိုကရက်ဆိုသူလက်ဟောင်းတချို့နဲ့ မျက်နှာသစ် တံမြက်စည်းနုကလေးများ တိုင်းရင်းသားဆိုသူကြီးတို့ တသိုက် အတိုင်အဖောက်ညီညီနဲ့ အန်တီဆန်ရှင် ရှေ့တော်ပြေးယိမ်းထွက်ပြနေတာမို့ ပလီပလာ ပါလီမန်သစ်အကြို ရှေးလူကြီးများရဲ့ ကဗျာတပုဒ်နဲ့ပဲ ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ နွယ်စိုးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ၉၁ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးခေတ် မြန်မာ့အလင်း နှစ်သစ်မင်္ဂလာသတင်းစာမှာ စစ်ပီးခေတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ […]
Filed under: history, politics, recycled	| LeaveaComment
မြို့သားကိုရင်၏ ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့် ဤဆောင်းပါးသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထုတ် အရေးတော်ပုံဂျာနယ် တွဲ ၁ မှတ် ၂ ဒီ ၂၀၁၀ မှဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒီနေ့ဗမာပြည်ကစာပေလောကမှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရတဲ့ ၀မ်းနည်းစရာကိစ္စတခုကတော့ ဗမာစာ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာတွေ ဗရနှံ့ကျဲနေတာပါပဲ။ ဆွမ်းဆန်ထဲကြွက်ချေးရောတာလိုပဲ အကျည်းတန်လှပါတယ်။ ဒီလို ယိုသူမရှက်မြင်သူရှက် စာမျက်နှာတွေကိုကြည့်ရင်း ဒါတွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေများမြင်ရင် ဘယ်လိုများပြောကြမှာပါလိမ့်ရယ်လို့ မကြာခဏ ခေါင်းထဲမှာ အတွေးပေါ်မိပါတယ်။ “ခင်ဗျားတို့ဗမာစကားဟာ ဒါလောက်ဆင်းရဲသလား၊ ဒီစကားလုံးလေးတွေလောက်ကိုတောင်မှ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ မရှိဘူးလား” စသဖြင့်အမေးခံရမှာကို တွေးရှက်မိ ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း မှားတာတွေကလည်း မနည်းလှတော့ နှစ်ခါပြန်ရှက်ရတာပေါ့။
Filed under: guest column, literature, nationalism, recycled	|9Comments
From Britain-Burma Society 2010 Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know by David I. Steinberg £9.99 paper back 256 pages from Oxford University Press ISBN-13: 978-0195390681
Based on An Academic Database of Doctoral & Other Postgraduate Research Done at UK Universities on India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Other Asian Countries Over 100 Years got from burmaresearch googlegroups and soas website, Burmese names are bolded. 1922 BLitt Oxford The history of Burma to 1824 G E HARVEY 1930 BLitt Oxford Sir […]
Filed under: education, history, note	|3Comments
Fromalong-time literary friend abroad, Dagmar Bečková – Myathida ‘s blog post (2008) at Burma Center Prague on my grandpa, the late Ludu U Hla. “He was born on January 19, 1910 in the village Puzunmyaun near the town of Nyaunlepin, and died on August 7,1982 in Mandalay……
(၁) စလင်းသူကောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းပါမောက္ခ ယခုမြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အုန်းကြည်လေး (အိုဂျီဦးစိုးမြင့်ကတော် သခင်ဗသိန်းတင် ခယ်မမှာ ပါမောက္ခအုန်းကြည်ကြီးဖြစ်ပါသည်) ရေးသားပီး ယခုထိ ပြင်ပတွင် မရိုက်နှိပ်ရသေးသော ဒေါက်တာသန်းထွန်း ပင်စင်ယူစဉ်က ထုတ်သည့် “သမိုင်းဟင်းလေး” ကျောက်ပုံနှိပ်စာအုပ်တွင် ပါရှိဘူးသည်။
Filed under: history, obituary	|4Comments